LG ga-eweta na Septemba 6 a mobile na ihuenyo abụọ | Gam akporosis
LG hapụrụ anyị afọ a ihe nlereanya nwere ihu abụọ, na mwepụta nke V50 ThinQ, ekele maka ngwa nke na-enye gị ohere ịnweta ihuenyo abụọ na oke njedebe a. O yiri ka akara ndị Korea na-akpọ n ’ụdị ekwentị adịka ha kwupụtara ọkwa ọhụrụ maka ekwentị na Septemba. A na-ekwu na ọ ga-abụ V60 ThinQ.
Thelọ ọrụ ahụ bipụtara vidiyo na-ekwupụta ngosipụta nke ekwentị a. Mana rue ugbu a anyị enweghị nkọwa ọ bụla gbasara ya, naanị nke ahụ ngosipụta nke ọrụ ya ga-ewere ọnọdụ na Septemba 6, na njedebe nke IFA a emere na Berlin. Ihe ngosi a na-akpọ iji nye mmasị.
LG ebipụtala vidiyo ebe anyị nwere ike ịhụ ekwentị na emepe iji kpughee ihuenyo nke abụọ. Vidio ahụ anaghị enye anyị ọtụtụ akara ngosi banyere ekwentị a karịa ndị nrụpụta Korea ga-eweta n'okwu a. Ihe ngosi niile na-egosi na LG V60 ThinQ ga-abụ ihe nlereanya anyị ga-ezute na mmemme ngosi a.
Ihe anyị na-amaghị bụ na n’ime nke a, a ga-eji ngwa ọhụrụ nwere ihu ihu abụọ a ma ọ bụ na ọ gaghị. Ebe ọ bụ na na V50 ThinQ ọ bụ maka ngwa na anyị nwetara ihuenyo ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka akara Korea emeela mgbanwe na ọhụrụ a na ihuenyo, nke ga-enwe thinner okpokolo agba.
Na mgbakwunye, ọ na-enye mmetụta na LG na-eduzi ekwentị a n'ahịa egwuregwu,, ebe ọ bụ na ị ga-ahụ egwuregwu gamepad yana foto ahụ ga-abụ nkọwa dị mkpa na ya. Ọ bụ ezie na ruo ugbu a anyị enweghị ozi ọ bụla gbasara nkọwa nke ụdị mbinye aka a.
Na Septemba 6 anyị ga-enwe obi abụọ gbasara ngwaọrụ a. Agbanyeghi na otutu izu ndi a gara aga enwere nsogbu banyere ngwa a LG ghachiri anyi n’ihu. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-ekwe nkwa ịbụ ihe na-eweta mmasị, yabụ anyị ga-ege ntị na akụkọ banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG iji gosi ekwentị abụọ na ihuenyo na September
100 nde mmadụ na-eji Google Files